mazava fonosana, mazava fonosana plastika, mazava boaty plastika, boaty plastika
HLP Klearfold dia izao tontolo izao lehibe indrindra mpamokatra ny mazava plastika vata , mpitarika Mpanome ny fanao thermoforming sy mazava plastika fantsona sy fihodinana , ary ny developer ny mazava fonosana fanavaozana tahaka ny Klearfold ® mpiandrysy Fahatakarana ny Hevitry ® fonosana rafitra, ary Duofold ® mitambatra fonosana. Tsy mampiasa ny mandroso indrindra fanontam-pirinty, Decorating, ary hiova finoana teknolojia. Ny format manan-tompo Soft Crease ® scoring teknolojia no miantoka fa ny Klearfold ® mazava boaty plastika nanangana haingana sy mora amin'ny tanana roa sy ny milina-hameno fampiharana.
Isika manolo-tena ambony indrindra manome ny fitsipi-mpanjifa, ka nanompo ireo boaty plastika mazava ilain'ny tsena any Amerika Avaratra nandritra ny 15 taona. Efa nanorina ny azo antoka, tena mahomby foto-drafitrasa, ary za-draharaha any Amerika Avaratra varotra sy ny fitantanana ekipa. Ny nanokan-tena fanohanana mpiasan'ny manome 24 ora tsara ny mpanjifa, ary miezaka ny hamonjy: Plastic boaty fakan-teny ao anatin'ny 24 ora CAD santionany ao anatin'ny telo ka hatramin'ny dimy andro feno loko plastika efajoro comps ao anatin'ny herinandro ny fandraisana ny sary fiterahana an'i Amerika Avaratra tamin'ny enina ny valo herinandro ny boaty plastika santionany fankatoavana
ISO 9001 izahay laza sy ny Sedex ® mpikambana. Miasa mafy isika mba hahazo ny fenitra rehetra ara-tsosialy maneran-fanarahan-dalàna, ary mamporisika ny mpanjifa mba hitsidika sy hanatanteraka ny tsara sy ny fanaraha-maso ara-tsosialy fanarahan-dalàna. Koa izahay mpikambana ny Fanao-Trade Partnership Manohitra ny Fampihorohoroana (C-TPAT), an-tsitrapo famatsiana fiarovana fandaharana tarihin'ny US fomba amam-panao sy ny Sisintany Fiarovana, mifantoka amin'ny fanatsarana ny fiarovana ny orinasa tsy miankina 'ny famatsiana rojo.